"Midkee Ayaad La Jeclaan Lahayd FA Cup-ka?" - Halyeeyga Arsenal & Chelsea Ee Cesc Fabregas Oo Jawaab Cadaan Ah Bixiyay - Gool24.Net
“Midkee Ayaad La Jeclaan Lahayd FA Cup-ka?” – Halyeeyga Arsenal & Chelsea Ee Cesc Fabregas Oo Jawaab Cadaan Ah Bixiyay
Halyeeyga kooxaha Arsenal iyo Chelsea haatana qaybta ka ah kooxda AS Monaco ee Cesc Fabregas ayaa kooxihiisii hore oo maanta ku kulmaya gegida Wembley si ay ugu calaf qaadaan tartanka FA Cup-ka kala doortay.
Fabregas ayaa si lama filaan ah u doortay in kooxda uu koobka la doonayaa ay tahay Arsenal walow uu Chelsea kaga dambeeyay, Cesc ayaa kooxda waqooyiga London usoo ciyaaray 2003 ilaa 2011 isaga oo kula soo guuleystay koobab uu kamid yahay FA Cup qudhiisu.
Fabregas ayaa sababta uu u doortay Arsenal ku sheegay inay tahay kooxda koobka uga baahi badan Chelsea maadaama oo ay kaga xidhan yihiin waxyaabo badan sida inay Europe Leagueugu soo baxayaan iyo inay kalsooni ku helayaan.
Fabregas ayaa taariikhdiisa laba jeer kusoo guuleystay FA Cup, marka hore ayuu Arsenal lasoo qaaday sanadkii 2005 halka uu sanadkii 2018 kula guuleystay Chelsea.
Chelsea ayuu koobkeedii ugu dambeeyay ahaa UEFA Europe League oo ay kusoo guuleysteen sanadkii hore ee 2019 iyagoo isla Arsenal kaga qaaday 4-1 kulan ka dhacay magaalada Baku.
Dhinaca kale koobkii ugu dambeeyay ee Arsenal ayaa ahaa FA Cup 2017 waxaana ay Gunnerrs ka qaadeen isla Chelsea waana sababta xiisaha usii yeelaysa kulanka caawa.
Fabregas oo arrimaha koobka caawa ka hadlaya ayaa yidhi “Arsenal ayaa in badan u baahan, Chelsea asaas ahaan sanad kasta waxa ay ku guuleysataa koob sidaas darteed iyagu waa kuwo ka duwan sidii hore xaaladan”
“Marka laga eego dhinaca koobabka Arsenal ayaa u baahan in badan iyo kalsooni ay ku helaan xilli ciyaareedka dambe iyo inay Europe kaga qayb galaan, Chelsea waxa ay ku jirtaa Champions League Arsenal-na waxba ma hayso wakhtigan”
Good Man 👍 for you support us